Flags of Ethiopia & Ghana | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » Flags of Ethiopia & Ghana
Flags of Ethiopia & Ghana
Posted by kai on Oct 18, 2010 in History, Think Tank |4comments
Ref: CIA Factbook
ပျင်းပျင်းနဲ့ကူးတင်လိုက်တာပါနော..။ သုံးရောင်ချယ်အေ၇ာင်က Pan-African ကိုကိုယ်စားပြုတာတဲ့..။
အဲဒီနိုင်ငံတွေ(အီသီယိုးပီးယား။ ဂန်နာ)က မွဲမွဲနိုင်ငံတွေပါ။
“(1) The State Flag shall be prescribed as follows: The Flag is marked with yellow, green and red stripes inaproportionate ratio. On the green stripe in the centre of the State Flag isalarge white star covering all the three stripes directing upwards.
Myanmar: 2011 flag
ငယ်ငယ်က စာထဲမှာ ပါတဲ့ အပြာက အေးချမ်းခြင်း အနီက ရဲရင်းခြင်း.. ဘာညာ ကွိကွ.. ဆိုပြီးတော့.. ဖတ်စာ သင်ခန်းစာတွေ ပါပြင်ရမှာပေါ့.. အေးချမ်း တည်ငြိမ်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အပြာ မပါတော့ပါလား.. အပြာမပါလို့ ဆန့်ကျင်ဘက်တော့ မတွေးချင်ဘူး..
အနာဂတ် အလံတော်ကိုတောင် ကြိုတင်ပုံစံ စွဲထားတာကို သိလျှက်နဲ့ 
ဘာ့ကြောင့်များ လူကြီးမင်း အမတ်လောင်းတွေ ဝင်ယောက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြပါလိမ့်!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
အလံတော်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကို မခန့် မှန်းပြဘဲနဲ့ ဘယ်နဲ့ မွဲတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အလံနဲ့ နှိုင်းပြနေရတာလဲ
အမေရိကန်မှာနေတယ်လည်းပြောသေးတယ် ဘယ့်နှယ် နတ်ကတော်တွေ ဘိုးတော်တွေရဲ့ရတြာခြေနည်းတွေနဲ့ တွက်နေရတာတုံး
အမေရိကန်အလံပုံထုတ်ရမှာလား ဒါဆိုရင်တော့ အကြွေးနည်းနည်းများသွားနိုင်တယ်
ဟဲဟဲ အရကားနောက်တာ ချစ်ရို့ 
မန်းလေးဂေဇက်ပုံနဲ့ ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိအုံးမယ်နော်
ဘယ်နှယ်ကဘယ်နှယ်… လာတူနေရပါသလဲပေါ့..။ တူမဲ့တူလည်း..မွဲတဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့မှတူတော့ အောင့်သက်သက်ပေါ့။
ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ .. ဘယ်လိုအိပ်ငိုက်ပြီး ရွေးလိုက်သလည်းပေါ့။
ဘာဒီဇိုင်း..အိုင်ဒီယာ ထူးထူးဆန်းဆန်းမှ ရှိပုံမရဘူး..။
မန္တလေးဂေဇက်လိုဂိုက … မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်အော်ရီဂျင်နယ်ကို ဒီဇိုင်နည်းနဲ့ပြင်ဆွဲထားတာပဲ..။